Nokho, okuyinto imodi yezokuthutha kuhamba phambili? Ngezinye Londoloza Isitimela, singabeqiniso Yiqiniso olubandlululayo ucabanga ukuthi travel isitimela iyona aphakeme uhlobo zokuthutha! Funda ku-ngezansi ukuthola ukuthi yini kungcono masikhuphuke ugxumele post wethu ikhambo isitimela kuqhathaniswa indiza travel.
Air travel ukuba ngomunye owaziwa izindlela esheshayo ufike lapho uya khona, Nokho, lokhu kuphela ukuthatha indiza uqobo libhekelele. How far ngaphambi kwendiza yakho ingabe kufanele sifike ukuwela eside check-in futhi umugqa yezokuphepha? Uma ungene isikhwama kufanele ulinde ukuqoqa le uma ufika - lokhu isikhathi. Ngokungafani zezindiza, eziteshini zezitimela azikho ukungena noma imigqa yezokuphepha, ngakho akudingeki ukuba kube amahora esiteshini ngaphambi yakho Luzoba njani uhambo. Iningi iziteshi ezinkulu zezitimela zitholakala khona kanye enhliziyweni wemizi ukukhonza. Isikhathi esiningi uma uthatha isitimela, ufika ngqo lapho uya khona. Nokho, ukuthatha indiza, ungase bachitha amahora ukuthola ukuya nokubuya esikhumulweni sezindiza.
Ngaphandle kokuba baye ukhokhele business class, isikhala sakho ngokuvamile kuvinjelwe ku isihlalo indiza. On isitimela, ungahambisa ngokukhululekile ngaphezulu, futhi kuyomelwe legroom eminingi ngokusondelene izihlalo zakho. Phakathi kwakho indiza, kufanele ulinde sokungena ngemvume esihlalweni ibhande ukuze uvale ukuhambisa kusuka esihlalweni sakho. Nokho, esitimeleni wena uye ngezansi aisles, washo ethatha kokulunywa noma ikhofi, nokubuka emhlabeni siqhubeka. A ebabazekayo ngesitimela kungaba ngisho iholide. Most European trains also offer free WiFi – something which cannot be yet said for all izindiza.
Izincwajana zemininingwane travel futhi likuvumela ukuhamba kahle isilwane sakho ehamba ekhulekelwa. nezilwane eziningi kungukuthi ezifaneleke air travel ngenxa impilo, ubudala noma zohlobo.
abagibeli ku izitimela European Kungathatha izinja, amakati kanye nezinye izilwane ezincane nabo isikhathi esiningi ngaphandle nezindleko!
Ukuze uthole olunye ulwazi, Landela Save A Train on Facebook, -Akhawunti Instagram futhi Twitter Accounts.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-versus-plane-travel/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Catch me if you can, and if you can't find me in Save A Train Blog - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte